Xiriirka kubadda cagta Masar oo uu ka soo yeeray War farxad u ah kooxda Liverpool oo ku aaddan Mohamed Salah – Gool FM
(Liverpool) 07 Feb 2019. Xiriirka kubadda cagta Masar ayuu ka soo yeeray war farxad gelinaya kooxda Liverpool iyo taageerayaasheeda kaddib markii ay sheegeen in Salah aan looga yeeri doonin xulka bisha Maarso ee soo aaddan.
Mohamed Salah ayaa heli doona labo todobaad oo fasax ah kaddib markii xiriirka FA-ga dalka Egypt ay xaqiijiyeen inaan looga yeeri doonin waajibaadka xulka qaranka bisha Maarso.
Xulka qaranka Masar ayaa wajihi doona Niger 21 bisha Maarso isreeb-reebka Koobka qarammada Afrika 2019 ee (Africa Cup of Nations qualifying 2019) ka hor inta aysan kulan saaxiibtinnimo la ciyaarin Nigeria 25 bisha Maarso.
Xulka Egypt ayaa u soo baxay tartanka AFCON 2019, sidaa darteed uma baahna wax natiijo ah kulanka ay ka horjeedaan Niger.
Madaxa xiriirka kubadda cagta dalka Masar ee FA-ga, Ahmed Shobier ayaa xaqiijiyey in Salah oo 26-sano jir ah aan loo soo xulan doonin xulka qaranka Masaarida bisha soo aaddan ee Maarso.
“Mohamed Salah ma ciyaari doono kulanka Niger ee isreeb-reebka AFCON ama xitaa kulanka saaxiibtinnimo ee Nigeria.” ayuu yiri Ahmed Shobier.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Salah uu fasax heli doono inta u dhaxaysa kulanka ay kooxdiisa Liverpool u safreyso Fulham 17 bisha Maarso illaa kulanka kale oo ay garoonkeeda Anfield ku soo dhoweynayaan Tottenham Hotspur 31 bisha Maarso, taasina waa mid farxad u ah Reds iyo taageerayaasheeda.
Kooxda Liverpool ayaa lu dhacday kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League kaddib markii xalay ay kooxda Manchester City la wareegtay hoggaanka Ingiriiska markii ay guul ka gaartay naadiga Everton, inkastoo ay isku dhibco yihiin City iyo Reds, haddana welina kooxda tababare Klopp ayaa gacanta ku haysata kulan baaqi ah.